We.com.mm - အောင်မြင်မူရနိုင်တဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို အတွက် ရှိသင့်တဲ့ အမူအကျင့်များ
ကိုယ်အတွက် ဒီအမူအကျင့်တိုင်းဟာ ရှိကို ရှိရမယ် အနာဂတ်မှာ ပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ အောင်မြင်တဲ့ မိန်းမသားတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို ရည်မှန်းထားရင် ဒီအချက်တွေနဲ ညီမညီ တစ်ချက်လောက် ကြည့်သင့်ပြီနော်။
၁. ကိုယ့်အတွက် ကိုယ် အချိန်ပိုပေးတတ်တဲ့ မိန်းကလေး
သူများတွေနဲ့ အတူ အချိန်ဖြုန်းတာကို အတော်အသင့်ဘဲ လုပ်တယ်။ သူတိုတွေဟာ များသောအားဖြင့် ကိုယ်အတွက် အချိန်ပိုပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်လေးမှာ သူများတွေနဲ့ အတူပျော်တာထက် ပိုတဲ့ စိတ်ကျေနပ်မုူ ပျော်ရွင်မူ ကို ရယူတတ်ကြတယ်။
၂. အမြဲတမ်း ချင့်ချိန် တွေးတော တတ်တဲ့ မိန်းကလေး
ဒါကို ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် လူတွေ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Money နဲဘဲ ပြောပြလိုက်ပါမယ်။ Saving Money လုပ်ပေးပါ။ အသုံးဖြုန်းကတော့ လူတိုင်းလုပ်တယ် ဝါသနာပါရင်ပါသလို ဖြုန်းတာဘဲ ။ အသုံးမလိုရင်တော့ စုဆောင်းပါ။ ဒီလို စုဆောင်းတာကလဲ ကိုယ်အတွက်ဘဲ ကိုယ်လုပ်ရမှာနော်။ ချင့်ချိန် တွေးတော တတ်တဲ့ အတွေးလေးရှိပါစေ ။
၃. ကိုယ်ကိုကိုယ် အမြဲ Challenges ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေး
ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲ ?ဖြစ်ချင်တာကို လေထဲမှာ တိုက်ဆောက်သလို စိတ်ကူးနဲ့တင်ပျောက်မသွားဘဲ စိန်ခေါ်တယ်။ ငါ ဒီအလုပ်ကို ဘယ်ချိန်မှာ လုပ်နိုင်ရမယ် ရအောင်လုပ်ရမယ် Challenge ကို သူများနဲ့ မခေါ်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကို ပြန်စိန်ခေါ်တာကို ပြောတာပါ။
၄. Goals တစ်ခုထက်ပိုပြီး ထားတဲ့ မိန်းကလေး
လူကြီးတွေပြောကြပါတယ် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ပြီဆို တစ်ခုထဲ တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆိုတာပေါ့။ မိန်းကလေးတွေမှာ အိမ်မက် ရည်မှန်းချက် ဝါသနာ တွေ စုပေါင်းပြီး ဖြစ်ချင်တာတွေက တစ်ခုထက်မက ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာတွေရယ် လက်ရှိ မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်နေတာတွေက တခြားစီဖြစ်နေမယ်။ အိုကေ အာဆို စဉ်းစားရမယ် ကိုယ်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ရင်ထဲမှာထားထား ၊ လက်ရှိအလုပ်ကိုလဲ ကောင်းအောင်လုပ်မယ် ကိုယ်ရည်မှန်းချက်ကလဲ တစ်နေဖြစ်သွားရမယ် အိုကေ ။
၅. ကိုယ်တိုင် အရာရာဆုံးဖြတ်နိင်တဲ့ မိန်းကလေး
မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ဖို ဆို တိုင်ပင် ဆွေးနွေးကြတယ်။ ကိုယ်ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲ ဖို့ ကိစ္စဆိုရင်တော့ ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်မူထားပြီး မှန်မမှန် ဆုံးဖြတ်ပါ ချင့်ချိန်တွေးတောပါ။ ကိုယ်ဘဝကို ကိုယ်ပိုင်ပြီး ကိုယ်လမ်းကိုယ်လျောက်ဖို ဆုံးဖြတ်ပါ။
၆. ကိုယ်ကိုကိုယ် စိတ်ချမ်းသာသလို နေတတ်တဲ မိန်းကလေး
ဘဝကြီးက နေတတ်ရင် ပျော်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေကို 99% လောက် ever တွေးနေပြီး နေတိုင်းလိုလို တွေးပူတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ လောကကြီးကို အရှံးပေးလိုက်တာနဲ့ အတူတူ ပါဘဲနော်။
မိန်းကလေးတွေက စိတ်ညစ်ရင် ယောက်ကျားလေးတွေ စိတ်ညစ်တာထက် ပိုဆိုးတယ် တစ်နေတည်းတင်မဟုတ်ဖူး အမြဲ စိတ်ညစ်စရာတွေကို လည်ပင်းချိတ်ထားကြတာ။ စိတ်ချမ်းသာသလို နေရမယ် ရူးချင်ယောင်ဆောင်တတ်ရမယ် မသိဖူး ငါပျော်တယ် ဒါဘဲ။
၇ . ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ မိန်းကလေး
မိန်းကလေးတင်မဟုတ်ပါဖူး လူတိုင်းမှာ ဒါက မတူညီတဲ့ Life style တွေ ရှိကြတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ အားနည်းနေတဲ့ Lifestyle ကြီးကိုဘဲ တွေးပူပြီး ဘေးလူရဲ့ စကားတွေနဲ့ ပြောင်းလဲပစ်ဖို အနာဂတ်ကို ရှေမဆက်နိင်ဖြစ်နေတယ် ကိုယ့်အားနည်းချက်ကို အားသာချက်အဖြစ် ပြန်လည်ပြောင်းလဲ ပြီး အောင်မြင်မူရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
ဒီအချက်တွေထဲကမှ တခုလောက် သင်နဲ့ တူညီနေတာ ရှိခဲ့ရင် ဆိုရင် ကိုယ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မူ စတင်ထားပြီး အရာရာ ကိုယ်စိတ်နဲကိုယ် လုပ်ဆောင်လိုက်တော့ Ladies တို့ရေ
အပူလောင်ရင် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ …. ?